Imihlume yaseVietnam iyisihlangu ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Shrimp aquaculture isusa izinkulungwane zabalimi ebuphofini eVietnam, kepha ibangela ukubhujiswa okuqhubekayo kwemihlume. Lezi zinhlelo zemvelo zinomthelela wokuthi zikwazi ukuyeka ukuqhubekisela phambili ukuguguleka komhlabathi nokukhuphuka kwamazinga olwandle kubangelwa ukuguquka kwesimo sezulu.
Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu iya ngokuya ikhula kakhulu futhi le mangrove iyinhlobo yesithiyo esivikela iVietnam emiphumeleni efana nokuguguleka nokukhuphuka kwamazinga olwandle. I-Shrimp aquaculture iyanda kulezi zindawo futhi ithuthukisa ezohwebo nomnotho. Kodwa-ke, ikhiqiza imithelela emihlangeni, iyonakalisa futhi ibenze balahlekelwe indima yalo njengesihlangu ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu.
1 Ukuqedwa kwamahlathi
Kumahektha angama-270.000 abemboza ugu lwaseVietnam ngo-1980 kusele ama-60.000 kuphela, ngokwemininingwane kahulumeni. Lokhu kugawulwa kwamahlathi kudalwa ukufuduka kwamadolobha nokuthuthukiswa kwezokuvakasha. Iningi lalo lidalwa imboni ye-prawn, okwathi ngo-2016 yathumela emazweni angaphandle ama-euro ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2.700.
I-aquaculture iye yanda kakhulu kusukela ngeminyaka yama-90 futhi kube nomthelela ekulahlekeni komhlume. Manje sekunokwaziswa okwengeziwe ukuthi kufanele bavikelwe, kepha sekusele abambalwa kakhulu futhi kunzima ukuvuselelwa.
Imihlume inezici ezikhethekile ezenza ihluke, njengokuxuba amanzi ahlanzekile nosawoti olwandle nasemifuleni. Ngenxa yale mihlume, izinhlobo zezilwane nezitshalo ezingaphezu kuka-700 zingahlala ndawonye, ​​ngaphezu kokuvikela ogwini oluntekenteke lwaseVietnam kusuka ukukhuphuka kwamazinga olwandle nokunciphisa imiphumela yeziphepho.
Inkinga ukuthi abalimi bagawula umhlume ukuze benzele intsha isikhala esithe xaxa. Ukugwema le nkinga, ihlelwe ukuqeqeshwa kwama-aquaulturists angama-4.100 abafundiswa ukulima ngokwemvelo kanye nezinyathelo zokuthola zonke izitifiketi ezidingekayo zokuthunyelwa kwamanye amazwe kwama-crustaceans ngophawu lwezinto eziphilayo.
Wonke umuntu kufanele afunde ukusebenza endaweni ngaphandle kokugawula ukukhulisa amaphuphu abo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Imihlume yaseVietnam iyisihlangu ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu